မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် Myanmar Democracy Congress: NLD ၏ ငွေချေးလုပ်ငန်းများ အစီအစဉ် ကန်.ကွက်သွားမည်
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 12:13 AM
အင်အယ်ဒီကို ...... သဖြင့် ကန့်ကွက်သည်။
ကြံ့ဖွတ်ကို ...... သဖြင် ကန့်ကွက်သည်။
နအဖ အစိုးရအဟောင်းကို ...... သဖြင့် ကန့်ကွက်သည်။
လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားများကို ..... သဖြင့် ကန့်ကွက်သည်။
အင်ဒီဖက်ဖ်ကို .... သဖြင့် ကန့်ကွက်သည်။
တိုင်းရင်းသား ပါတီများကို ....... သဖြင့် ကန့်ကွက်သည်။
ကိုယ်လဲ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် ဘာတခုမှ လုပ်မပြနိုင်း))
သူများ လုပ်တာကိုပဲ ဘေးထိုင် ဘုကန့် နေသလို မြင်၏း)))))))))))
အပြည့်အ၀ထောက်ခံပါသည်။ ဒီလိုပွင့်လင်းရိုးသားစွာ ထောက်ပြဝေဖန်မှုများ ပြည်သူ့ကိုယ်စား လုပ်ပေးတာ ပါတီနိုင်ငံရေး လုပ်သူများအဖြစ်တာဝန်ကျေပါတယ်။
မှားတာကိုမှားတယ် မမှန်တာကိုမမှန်ဘူးဆိုတာ ပြောရဲမှ နိုင်ငံရေးသမားပီသမှာပါ။
ဒေါ်စုလုပ်လို့ အင်အယ်ဒီလုပ်လို့ မှားတာကို မှားတယ်လို့ မပြောကြ မပြောရဲကြရင် စစ်အာဏာရှင်ကို သက်ဆိုးရှည်အောင် ကျားကန်ပေးနေသလိုပါဘဲ။
မှားတာကို မှားတယ် မမှန်တာကို မမှန်ဘူး ပြောရဲတယ်.. အဆိုကို တချက်လောက် ထောက်ပြမည်။
စစ်တပ်ကို လုပ်နေတဲ့ တချို့ အမှားကြီးတွေကို မှားတယ်လို့ ထောက်ပြရဲသလားး)))))
စစ်တပ်က နှစ်ပေါင်းများစွာ အုပ်ချုပ်လာတာ တိုင်းပြည်လဲ ဆင်းရဲ၊ အစစအရာရာ ချွတ်ခြုံကျ နေတာ အခုထိပါပဲ။ အခြေခံဥပဒေမှာလဲ အခုထိ စစ်တပ်၏ ပါဝင်မှုကို အတင်း လုပ်ယူထားတယ်။
NLD က ဆင်းရဲသားတွေကို ငွေထုတ်ချေးတာဟာ ပြည်သူတွေကို ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာ ပြတာဘဲ ... တကယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ အုပ်ချုပ်သူ မင်းတို့အဖေ န အ ဖ တွေရဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ လယ်သိမ်း အိမ်သိမ်း မြေသိမ်းတွေကျတော့ ပြည်သူကို ချမ်းသာစေတာလား ... NLD ဆိုတာ ပြည်သူတွေနဲ့ ထပ်တူရှိတယ် ပြည်သူတွေ ဘာတွေလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာ သိတယ် .. ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ ဆိုတာလဲသိတယ် .. အဲဒီလို သိပေမဲ့ န အ ဖ (နွားအဖွဲ့)ရဲ့ ကောက်ကျစ်ရက်စက်မူတွေက ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်အန္တရယ်ကို ဖြစ်စေနိုင်လို့ အောက်ဆုံးအဆင့်က စလုပ်နေရတယ်ဆိုတာ သိအောင် ကြည့်ပါ ... မြင်တတ်ပါ .. မင်းတို့ နွားအဖွဲ့တွေလဲ တကယ်စေတနာမှန်မှန်နဲ့ ငွေချေးဖို့ကို မပြောနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ စာဝတ်နေရေးအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေတောင် ပေးရဲလို့လား .. ထောက်ပြပါလား ဒါမျိုးတွေ ...ဝေဖန်လေ ... တောက် ... ပြောရင်းနဲ့ ဒေါသဖြစ်တယ် ...
Nwe Thu said...
This MDC Party always suggested to NLD to achieve the State Power. Humanitarian side, other people will do! NLD is the Political Party and knows "Politics" and is learing many years. MDC wanted Democratic groups to win. Obviously could see all along. Therefore think properly & do not change the subjects. MDC wants everyone the best!!! We respect them. Come on mates!!!